Barcelona Oo Gumaaday Alaves, Lionel Messi Oo Si Buuxda Ugu Quus Gooyay Karim Benzema Iyo Murugadii Osasuna Oo Ay Iska Reebeen. - Gool24.Net
Barcelona Oo Gumaaday Alaves, Lionel Messi Oo Si Buuxda Ugu Quus Gooyay Karim Benzema Iyo Murugadii Osasuna Oo Ay Iska Reebeen.
Barcelona ayaa cadhada guuldaradii Osasuna waxay kula dhacday kooxda Alaves ay xasuuq wayn u gaysatay waxayna kooxda Setien xili ciyaareedka La Liga ku soo xidhatay guul wayn oo ay ugu sii diyaar garowday kulanka Champions league ee Napoli.
Inkasta oo ay Barcelona soo qaadatay todobaad aad u xumaa oo ay koobkii ay difaacanayeen u lumiyeen kooxda ay sida wayn u xifiltamaan ee Real Madrid, haddana Barca ayaa dhinac iska dhigtay murugadii ay soo martay waxayna guul wayn ka gaadheen Alaves.
Barcelona ayaa kooxda Alaves ku gumaaday 5-0 iyada oo Lionel Messi uu laba gool dhaliyay si uu u sii dheeraysto hogaanka tartanka abaal marinta gool dhalinta La Liga ee Pichichi Trophy.
Barcelona ayaa ciyaarta dar dar waali ah ku bilaabtay waxayna Alaves birtau garaaceen saddex jeer intii u dhexaysay daqiiqadihii 3 aad ilaa 15aad waxayna Barca markiiba ahayd kooxda goolal badan laga filan karayay.
Daqiiqadii 24 aad da’yarka Ansu Fati ayaa dhaliyay goolka furitaankau ahaa goolasha badan ee Barcelona wuxuuna goolkan ku dhaliyay caawin uu ka helay Lionel Messi kaas oo sameeyay gool caawintiisii 21 aad ee La Liga uu xili ciyaareedkan ka sameeyay.
Laakiin daqiiqadii 34 aad Lionel Messi ayaa dhaliyay goolka labaad ee kooxdiisa Barcelona waxaana saamayn cajiib ah goolkan ku yeeshay da’yarka soo baxay ee Puig waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Barca hogaanka ku dheeraysatay.
Daqiiqadii 44 aad Luis Suarez ayaa xaalad xun ku sii abuuray kooxda martida loo ahaa ee Alaves wuxuuna Suarez goolkan ku dhaliyay caawin uu ka helay Jordi Alba waxaana qaybtii hore lagu kala nastay 3-0 ay Barca hogaanka ku haysay.
Daqiiqadii 57 aad Barcelona ayaa keensatay goolkeeda afraad waxaana goolkan dhaliyay Nelson Semedo oo dhawr daqiiqo oo kaliya ciyaarta ku jiray kadib markii uu badalay Clément Lenglet oo dhaawac ciyaarta looga saaray waxaana caawin kale goolkan ku sameeyay da’yarka is muujinayay ee Riqui Puig.
Ciyaarta ayaa noqotay 4-0 ay Barca ku gumaadayso kooxda ay martidau ahayd ee Alaves laakiin Barcelona ayaa wali ahayd kooxda goolasha kale raadinaysay.
Daqiiqadii 75 aad Lionel Messi ayaa dhaliyay goolkiisa labaad ee ciyaartan wuxuuna u sii quus gooyay Karim Benzema oo dagaal wayn ugu jiray in uu Messi ka joojiyo abaal marinta uu iska yeeshay ee gool dhalinta horyaalka LaLiga wuxuuna Messi ciyaarta ka dhigay 5-0 ay Barca burburinayso Alaves.
Goolkan ayaa ahaa goolkii 25 aad ee Messi xili ciyaareedkan kadhaliyay La Liga wuxuuna sidoo kale sameeyay 21 gool caawin.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 5-0 ay Barcelona ku xasuuqday Alaves waxayna guushani u tahay mid ay ugu diyaar garoobeen kulanka adag ee ay Napoli kula ciyaari doonaan Champions League.